Kuwana iyo Yakakwana Kushambadzira uye Yekushambadzira Agency | Martech Zone
Kuwana iyo Yakakwana Kushambadzira uye Yekushambadzira Agency
NeChishanu, Gumiguru 9, 2009 Svondo, Ndira 13, 2013 Douglas Karr
Dai ndaive pane imwe kambani ndaitsvaga yakakwana kushambadzira kana yekushambadzira agency, ini ndaizowana agency ine zvinotevera hunhu.
Iyo yakakwana agency inonzwisisa maitiro ekuyera uye kuyera imwe neimwe svikiro.
Iyo yakakwana agency inoteedzera ese achangoburwa matekinoroji.
Sangano rakaringana rine vanyori vemavhidhiyo, matarenda enzwi, anodhiza dhizaini, grafiki dhizaini, nyanzvi dzekutsvagisa injini, nyanzvi dzekutengesa nhare, nyanzvi manejimendi manejimendi, mamaneja eprojekti, ecommerce uye nyanzvi dzekutendeuka, nyanzvi dzehukama neruzhinji, nyanzvi dzekushandisa, vanobhadhara-per-tinya nyanzvi, blogging nyanzvi, vezvenhau nyanzvi, analytics nyanzvi, uye vanogadzira mapuratifomu ese.
Iyo yakakwana agency haipo. Regedza kuvatsvaga!
Kana kambani yako ichinyatsoda mumwe wako pakuwedzera kushambadzira kwayo, wako akakwana agency anofanirwa kuve neanotevera hunhu:
Sangano rako rakakwana rinokunzwisisa, zvigadzirwa zvako uye masevhisi, marongero, zvemukati bhizinesi chimiro, uye hunyanzvi hwaunayo mukati.
Sangano rako rakakwana rinoziva niche iyo yavanogona - uye vanoisa pfungwa pane izvozvo pane kuyedza kuva zvese kune wese munhu.
Sangano rako rakaringana rakabatana zvakanaka muindastiri, Kuziva kwekuwana nekutaurirana nenyanzvi dzeindasitiri. Vanoziva kwekuwana videographer, vezwi tarenda, anodhinda dhizaini, graphic vagadziri, yekutsvaga injini yekugadzirisa nyanzvi, mobile kushambadza nyanzvi, brand manejimendi nyanzvi, maneja manejimendi, ecommerce uye shanduko nyanzvi, veruzhinji hukama nyanzvi, usability nyanzvi, kubhadhara-per-tinya nyanzvi, blogging nyanzvi, zvemagariro nyanzvi dzezvenhau, analytics nyanzvi, uye vanogadzira mapuratifomu ese.
Yako yakakwana agency inoziva maitiro ekugadzirisa mapurojekiti uchishandisa zvekunze zviwanikwa kuti usazonetseka nezvazvo. Sangano rako rakaringana pamwe rinotibhadharira kamwe, uye rinotarisira kubhadhara zvimwe zvese zviwanikwa.
Nezuro, ini ndanga ndiri pane aigona kunge mutengi uye murongi akaunganidza asiri pasi pemakambani mashanu kuti apinde uye abvunze mutengi wake. Akaziva kuti matambudziko avo aive akakura kudarika hunyanzvi hwaive nekambani yake mukati - saka akabuda ndokunoona muunganidzwa wakazara wevamazvikokota vemunharaunda kuti vabatsire kambani. Ini ndakaninipiswa kuve imwe yemafemu aya.
Kunyangwe kana ini ndasvika pakushanda pamwe netarisiro inoramba ichionekwa… asi hapana mubvunzo kuti mutengi akatowana yake yakakwana yekushambadzira agency neEvereffect.
Vamwe vanhu mutaundi vanotenda kuti vari kukwikwidza nefemu yangu kana vamwe. Maonero anotetepa anotyisa eiyo indasitiri. Asi, co-opetition kunofanirwa kuve kuchema kwedu kuungana. Kana isu tese tikashanda pamwechete kuti tiwane mhedzisiro kune vatengi vedu, vatengi vedu vanokura, dunhu redu rinokura, uye isu tinokura.
Ari Twitter Mune Yako Sevhisi Chiteshi Asi?
Gumiguru 9, 2009 na11: 59 PM
Gumiguru 11, 2009 na3: 31 PM